Nagu saabsan | Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.
Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.waa shirkad hogaan u ah dharka oo ku dhexjirta wax soo saarka iyo ganacsiga. Waxaan leenahay koox ganacsi khibrad leh & xirfad leh. Waxaan haynaa in ka badan 5,5Noocyada noocyada ah ee loo heli karo macaamiisha inay doortaan( qaabab dheeh & daabacan) laga bilaabo iyo qadarka qaabku waa ku koraya heer joogto ah 15% sanadkiiba. Iyada oo tayo sare leh iyo waxtarka sare, sidoo kale awoodda xoogan ee loo habeyn karo sida macaamiisha u baahan tahay.Waxay leedahay khibrad fara badan oo ku saabsan ganacsiga dhoofinta dharka iyo sumcad wanaagsan ku leh warshadaha.
Waxaan u habeynnaa badeecooyin kala duwan iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha kala duwan.Waxyaabaha aan soo saarno waxaa lagu calaamadeeyay astaamo ay ka mid yihiin biyuhu, ka hortagga dabka, iyo uumiga uumiga biyaha, hawo-qaadashada, waana anti-ma-guurto, anti-ma-guurto, iyo anti-ultraviolet. Iyada oo adeegsiyo kala duwan leh, alaabtayada waxaa laga samayn karaa daaqado, daboolida doonta, dalladaha qorraxda, alaabta beerta, teendhooyin iyo boorsooyin.
Midab Fudud Oo Fudud
Midab xawli xoog leh cimilada. Maryaha qaarkood haddii ay u soo baxaan iftiinka qorraxda muddo dheer way libdhi doonaan ama waayi doonaan xooggooda midabka.
Baaxad Weyn oo Midab & Naqshadeyn ah
DRO waxay bixisaa xulasho.Qof kasta wuxuu yeelan karaa dhadhan kala duwan iyo dookhyo midab kala duwan. Sidaa darteed, noocyo kala duwan oo naqshado iyo midabbo ah ayaa laga bilaabay suuqa si ay ugu haboonaato baahiyahaaga.
U adkaysta waxyeellada UV iyo fuuq baxa.DRO waxay ku khusaysaa wakiilada xannibaadda ultraviolet-ka ee aadka u ilaaliya laf-dhabarka polymer-ka ee dharka ka imanaya shucaaca UV. Sidaa darteed dhar dhar ah oo bannaanka ka ah, DRO waxaa lagu caddeeyey inay leedahay awood xoog leh oo ay ugu adkeysan karto saameynta soo-gaadhista dheer ee qorraxda, dabaysha, roobka iyo huurka Waa muddo dheer.